Dhagaxyo k9 teardrop rhinestones dhagaxa dhagxaanta ah, tayo sare leh dhammaan noocyada kala duwan ee dib u soo celinta dhalada dahabka ah ee alaabta iibka kulul kulul 3 iibsadayaasha
Saaxiibo badan ayaa ogaan doona in dhagaxa buluugga ahi ku yimaado qaabab badan. Sababtoo ah kiristaalo ayaa loo gooyaa si kala duwan, waxay soo saari doonaan qaabab kala duwan. Kuwa ugu caansan waa wareega, iyo qaabab kale ayaa si wada jir ah loogu magacaabaa qaab gaar ah. Waxaan ugu yeeri karnaa dhagxanno qurux badan, sida wadnaha qaabeysan, qaab-qaabeysan, labajibbaaran, isha faraska, oval, iwm.
Dhagxaanta qurxan ayaa ah kuwa ugu fiican uguna wanaagsan! Dhagxannadan wajiga leh ee wajiga lagu dhejin karo waxaa lagu dhejin karaa xargaha garka leh ama lagu dhejin karaa jaakad qurxin si loo abuuro qaabab qurux badan oo iftiin leh. Waxaa loo isticmaali karaa dharka, bacaha, kabaha, cabirka yar ayaa loo adeegsan karaa farshaxanka ciddiyaha. Fadlan la soco dhagaxyadan oo aan lahayn godad.
Nooca Shahaadada Qiimeynta Kooxda saddexaad
Nambarka Model G190509001
Midabka gadhka Fadlan hubi kaarka midabka
Magaca badeecada Crystal Stone Fancy Stone
Tayada 1 Tayada K9
Tayada 2 Tayo Sare
Cabbirka Fadlan hubi xulashada midabka
Midab Fadlan hubi kaarka midabka
Isticmaalka Dharka / Kabaha / Bacaha / Nair Art
Awoodda Sahayda: 1000 Bac / Bacaha Toddobaadkii
Faahfaahinta Baakadaha: Xiridda garkaha looxaanta wiishka looxayo, ka dibna ku rid santuuqa, ama toos boorsada ugu rid.
Jumlada K9 Teardrop Rhinestones Jaydhada Wanaagsan, Tayada Sare Dhammaan nooc kasta oo Point Back Glass Fancy Stone
Magaca sheyga: Crystal Rhinesotne, Fancy Stone
Magaca Nooca: DS Crystal
Qaabka & Cabbirka: Fadlan hubi buugga hoose
Tayada: Tayada sare, tayada K9
Qaababka & cabbirrada kaladuwan way kala duwan yihiin.
Haddii ay jiraan wax dan ah, fadlan nala soo xiriir!
Midab: Fadlan hubi xulashada midabka
3-15 maalmaha shaqada
Hore: 2mm dhagaxa gemstone dabiiciga ah ee buluuga ah ee dabiiciga ah samaynta dahabka
Xiga: Jabuutyo dhalaalaya oo tayo sare leh oo dhalaalaya MIYUKI delica beads 11/0 ee samaynta dharka qurxinta dharka